अभिलेखको एजेन्सीको मृत्यु | Martech Zone
एजेन्सी अफ रेकर्डको मृत्यु
बुधबार, डिसेम्बर 1, 2010 बिहीबार, जुलाई 2, 2015 Douglas Karr
परिदृश्य एजेन्सीहरूको लागि मोर्फि is गर्दैछ।
पछिल्लो हप्तामा, म5भन्दा कम बिक्री कलमा छु जहाँ सम्भावित पहिले नै सेवा प्रदायक थियो, प्रदायक छनौट गर्दै थिए, वा पहिले नै एजेन्सी थियो। हामीले एउटा कम्पनीले भाडामा लिएका थियौं तिनीहरूका सर्च ईन्जिनको स्तर बढाउन। एक मिनेट भन्दा कमको लागि तिनीहरूको साइट समीक्षा गरेपछि, म उनीहरूलाई यो कुरा थाहा दिन्छ कि यो उनीहरूको प्राचीन CMS दिएमा यो स्मारक प्रयास हुनेछ। तिनीहरूले एजेन्सीलाई सम्पर्क गरे जसले उनीहरूको लागि आफ्नो साइट निर्माण गरेका थिए र एजेन्सीले तुरुन्तै तिनीहरूलाई नयाँ CMS अपग्रेड गर्न अर्को उद्धरण दियो। किन त्यो एजेन्सीले उनीहरूलाई पहिले थाहा दिएन?
अर्को कम्पनीले हामीलाई ब्लगिंग प्लेटफर्ममा लगनशीलताका साथ गर्न लगायो। समस्या यो थियो कि तिनीहरूले सोधेका प्रश्नहरू प्लेटफर्मको शक्तिसँग पigned्क्तिबद्ध हुँदैनन्। किन उनीहरू प्लेटफर्मको बिक्री बिन्दु बारे सचेत थिएनन्? यो हतारमा बिक्री कल थियो जहाँ टोलीले पर्याप्त सम्भावनाको आवश्यकताहरू वा उनीहरूको श्रोतहरू पहिचान गर्न सकेन।
हामी अर्को कम्पनीको सास अनुप्रयोग समीक्षा गर्नका लागि उनीहरूलाई परिश्रम गरिरहेका छौं जुन उनीहरूले खरीद गरिरहेका छन्। कम्पनीले हामीलाई सास स्पेसमा हाम्रो अनुभवको कारण र बजारमा अनुप्रयोगहरूको अथाह ज्ञानको बारेमा भर्ती गरेको छ। तिनीहरूको आफ्नै आन्तरिक उत्पादन र टेक्नोलोजी टोली थियो - तर अझै एउटा चाहान्थ्यो ताजा हेर्नुहोस्।
हामी तपाईको विशिष्ट एजेन्सी हौं ... वा त्यसैले मैले सोचें। पछिल्लो अनलाइन मीडिया रिपोर्टमा eConsultancy, तिनीहरूले एजेन्सीहरूमा प्रवृत्ति पहिचान गरे र कसरी मार्केटरहरूले तिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। परिणामहरू धेरै चौंकाउने छन् ... र परिचित छन्!
त्यहाँ अब छैन अन्तर्क्रियात्मक अभिलेख अभिलेख - एजेन्सी फर्महरूले आफ्ना श्रोतहरूलाई समेकित गर्दा र साइलोहरू ढकढक्याउँदा, मार्केटरले यसको डिजिटल अभिलेखलाई "अभिलेख एजेन्सी" को रूपमा छनौट गर्न आवश्यक पर्दैन। (यो तथ्य यो पनि हो कि "एओआर" को धारणाले यसको अर्थ हराइसकेको छ किनकी मार्केटर्सले उनीहरूको विज्ञापन बजेट बिभिन्न पसलहरूमा फैलाउने छनौट गर्दछ।) परम्परागत र अन्तर्क्रियात्मक बीचको पर्खाल तल झर्दै जाँदा डिजिटल एकाईहरू बाध्य हुनेछन् ठूला एजेन्सी फ्रेमवर्क भित्र आफूलाई सब्मिंग गर्ने वा व्यक्तिगत मिडिया खाताहरूको ठूलो नियन्त्रणको लागि परम्परागत एजेन्सीहरूलाई चुनौती दिनको बीचमा छनौट गर्नुहोस्।
बीचमा प्रतिस्पर्धाको दायरा डिजिटल मार्केटिंग पसल चौडा हुनेछ - परम्परागत र अनलाइन मिडिया खरीद बीचको युद्ध को व्यापक विपणन दुनिया भर मा मिरर गरीन्छ। अर्को शब्दमा, ग्राहकहरू मार्केटिंगको लागि साँच्चिकै "समग्र" दृष्टिकोणको माग गरे जस्तै, अभियानको नेतृत्व गर्ने लडाई केवल विज्ञापन पुरुष र महिलाले मात्र नभई पीआर फर्महरू र रचनात्मक डिजिटल घरहरू र सोशल मिडिया विशेषज्ञहरू द्वारा पनि छेड्न सक्छ।
को उदय जडित एजेन्सी - यी लडाईहरु बाहिर खेल्ने रूपमा, ठूलो होल्डिंग कम्पनी संरचना पहिले कहिल्यै एकजुट मा यसको विभिन्न भागहरु लाभ उठाउने कोशिस गर्नेछ। निस्सन्देह, कारण होल्डि companies कम्पनीहरूले यति धेरै मार्केटिंग कार्यहरू तान्छन्, सृजनात्मकबाट, योजना बनाउन र खरीद गर्न, पीआर गर्न मार्केटिंग र लगानी परामर्श एक ठूलो गेस्टल्ट प्रभाव पैदा गर्नु थियो, जहाँ सम्पूर्ण यसको अंशहरूको योग भन्दा ठूलो हो। भन्नु पर्दैन, त्यस मोडेलतर्फ करीव करीव years० बर्ष काम गर्दै, थोरै होल्डिंग कम्पनीहरूले वास्तवमै यो विशेष लक्ष्य हासिल गरेको दाबी गर्न सक्दछन्, यद्यपि इनड्रोडहरू निश्चित रूपमा गरिएको छ।
पुरानो शब्दकोशको साथ, नयाँसँगै - विगतमा, "GRPs," "प्रभावहरू" र "क्लिकहरू" जस्ता सर्तहरूले दर्शक मापनको मानकको रूपमा सेवा खर्च खर्च र अभियानको सफलताको निर्धारणको रूपमा काम गर्‍यो। यी सर्तहरूको महत्त्व कम आवश्यक हुनेछ। तिनीहरू "आजीवन मूल्य," "भावना / अनुकूलन" र "प्रभाव" को धारणा द्वारा प्रतिस्थापन गर्न योग्य छन्। ईतिहासको डस्टबिनको लागि "दर्शकहरू" को उपयोग पनि तयार छ किनकि यसले मानिसका निष्क्रिय समूहलाई संकेत गर्दछ। इन्टरनेट युगमा "एक झुकाव" एक मिडियामा अगाडि झुकाव र सोशल मिडियाको उदयमा, बजारमा पुग्न चाहने उपभोक्ताहरूलाई परिभाषित गर्नको लागि थप सही शब्द "सहभागीहरू" हुनेछन्।
बाट उद्धृत सूची अनलाइन मिडिया रिपोर्ट eConsultancy बाट।
यो कहाँ छ DK New Mediaको बृद्धि भएको छ ... मा जडित एजेन्सी ठाउँ। हामी मार्केटिंग समूहहरू र सेवा प्रदायकहरू र उनीहरूका उत्पादनहरू, उनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरू, उनीहरूका ग्राहकहरू, उनीहरूका सम्भावनाहरू, आफ्ना विक्रेताहरू, तिनीहरूका पीआर फर्महरू र तिनीहरूको एजेन्सीहरू बीच मध्यस्थ बनेका छौं। यो हाम्रो लागि उत्साहजनक समय हो र यो रिपोर्टमा हाम्रो व्यवसाय मोडलको मान्यकरण हेर्नका लागि उत्कृष्ट छ।
यदि तपाईं एक एजेन्सी हुनुहुन्छ - यो गियर्स परिवर्तन गर्ने समय हो, कुनै गाह्रो छैन। तपाईंले अन्य विक्रेताहरूसँग काम गर्नु आवश्यक पर्दछ, जसको बिभिन्न विशेषताहरू छन् ... डेलिभरेल्समा ओभरल्याप भएता पनि। कुपिटिशन भित्र छ। यदि तपाईं कम्पनी हुनुहुन्छ भने - यो समय पुन: विचार गर्ने समय हो रेकर्ड एजेन्सी र त्यहाँ पेशेवरहरूको विविधताको फाइदा लिनुहोस् जसले तपाईंलाई चुनौतिहरू जित्न मद्दत गर्दछ नयाँ मिडिया.
Douglas Karr Wednesday, December 1, 2010 Thursday, July 2, 2015
बनाम गर्न सक्दैन
हुनसक्छ तपाई यसमा राम्रो हुनुहुन्न
अगस्ट 16, 2012 मा 11: 36 AM
राम्रो पोस्ट! रमाईलो गर्नुभयो र तपाईंको मुख्य बुँदाहरूसँग सहमत हुनुभयो।
अक्टूबर २१, २०१ at २:०3 बिहान
साच्चिकै यो पोष्ट डगलसको आनन्द उठायो। हामी अर्को एजेन्सीमा पुग्न प्रत्येक चोटि राम्रा चीजहरू मात्र देख्दछौं।